Burburka xiriirka wada deganaanshada - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Burburka xiriirka wada deganaanshada
Guurka furan wuxuu dhamaadaa marka aysan lamaanuhu cinwaan isku mid ah deganayn. Dhamaanshaha guurka wuxuu saameyn ku yeelan karaa tusaale ahaan kaalmooyinka ay Kelada bixiso iyo kharashka xannaano-maalmeedka cunugga. Adiga ayeey waajib kugu tahay inaad ogeysiiso dhamaanshaha guurka furan.
Haddii lamaanaha guurka furan ay leeyihiin carruurta wadajir ah oo 18 sano kayar, lamaanuhu waa inay wadajir uga gaareen go'aan arrimaha ilmaha, si lamid ah furiinka kadib. Sidoo kale lamaanaha furan waxay caawimaad ga heli karaan ka heshiinta arrimaha tusaale ahaan heshiisiinta arrimaha qoyska. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Caruurta waalidiintoodu is-fureen.
Lammaanayaasha wada deganaanshuhu waxey lahaan karaan magac qoys oo ka dhexeeya. Haddii xiriirka wada deganaanshuhu dhamaado, saameyn kuma yeelanayo magaca qoyska. Haddii aad dooneyso inaad beddesho magaca qoyskaada, ka codso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka inay magaca kaa beddesho.
Guurka furan labada dhinac ee lamaanuhu midkiiba hantidiisa wuu heysanayaa. Marka uu dhamaado guurka furan hantida waxaa loo qeybiyaa qaab waafaqsan qofba inta uu lahaa.
Haddii ay hantida wadajir u yeelanayaan waa in iibsade loogu calaamadeeyaa labada dhinac islamarkaasna la keydiyaa warqada iibka. Markaas hantidaas waxaa loogu qeybinayaa labada dhinac si siman marka uu dhamaado guurka furan. Haddiise labada lamaane midkood lagu calaamadeeyo iibsade hantida waxaa isaga ayaa iska leh marka uu dhamaado guurka furan.
Lamaanaha furan waxay lahaan karaan hantida aan lahaanshaheeda si gaar ah looga heshiin. Markaas waxaa loo qaadanayaa in labaduba ay hantidaas si siman u wada leeyihiin waxaana loogu qeybinayaa si siman.
Haddii uu muran ka yimaado qeybinta hantida, lamaanaha furan waxay xaalada qaarkood marka lagu jiro maxkamadda ka codsan karaa hanti qeybiye kala saarista hantida darteed. Hanti qeybiyaha waa la codsan karaa haddii guurka furan uu jiray ugu yaraan shan sano ama ay lamaanaha furan leeyihiin carruur wadajir ah.
Xaaladaha qaar marka lagu jiro lamaanaha furan wuxuu furiinka uga heli karaa magdhaw lamaanaha kale. Lamaanha furan wuxuu heli karaa magdhaw haddii tusaale ahaan uu shaqo kula caawiyay lamaanaha kale kororsashada hantida islamarkaasna loo arko inaysan cadaalad aheyn in hantida loo qeybiyo qaab waafaqsan lahaansho oo kali ah.
Haddii wada deganaanshadu ay ku dhamaato geerida mid ka mid ah lammaanaha wada noolaa awgeed. Lammaaneyaashu isma dhaxlayaan. Tusaale ahaan lammaanaha laga geeriyooday xaq uma laha inuu sii degenaado gurigii ay wada deganaayeen, haddii gurigu uu yahay hanti uu lahaa lammaanihii geeriyooday. Dhaxalka lammaanihii geeriyooday waxaa leh ilmihiisa ama walaalkiis.
Lamaanaha furan waxay sameyn karaa dardaaran (testamentti) geerida darteed. Dardaaranka waxay ku cadeyn in hanti cayiman tusaale ahaan guri wadajir ay u leeyihiin in uu dhaxlayo lamaanaha kale. Lamaanaha guurka furan waxaa kale oo ay heshiis ka sameysan karaa furiinka dartiis qeybinta hantida. Haddii aad dooneyso inaad sameyso dardaaran ama heshiis qeybinta hantida guurka furan dartiis, talo weydii tusaale ahaan xafiiska caawimaadda sharciga ama sharciyaqaanka.